China Charmlite Plastic BPA 650ml - Igwe mmiri nwere ndị na-emepụta Lid na Base na ndị na-eweta ya | Charmlite
Charmlite rọba BPA 650ml - Igwe mmiri nwere Mkpuchi Ala na Nri
A na-eme karama mmiri mmiri Charmlite na-enweghị free na nsị na-enweghị nsị, ị ga-enwe obi ike na ọ bụ ahụike zuru oke!
Igwe anaghị agba nchara na - apụ apụ, ergonomic na nke eterese. Thedị kachasị mma iji were ebe ọ bụla, zuru oke dịka onye njem.
Zuru okè maka n'èzí - A na-enweta ya na agba dị iche iche.
Ha d ị ezigbo mma ị takeụọ mmanya ọ favoriteụ favoriteụ na-amasịkarị gị mana ihe ị ga-eji juju afọ dịịrị gị. Wụsa ihe ọ favoriteụverageụ kachasị amasị gị, ma nke ahụ bụ mmiri, ihe ọ juiceụ juiceụ, smoothies, mmiri ara ehi, tii, soda, yabụ, sap ma nwee obi ụtọ.
2.Mate: Plastic (PET)
Egwuregwu Reusable Sustainable Mara mma Egwuregwu Egwuregwu Mmiri Na-eji Ngwurugwu Na-adịghị Eke
Anyị niile maara mkpa ọ dị ịnwe mmiri. Alongnweta karama mmiri a ma ama mere ka ọ dị mfe karịa.
Ike dị iche iche nwere ike ịbụ nhọrọ. Suut maka ụmụaka na ndị okenye.
Ọ dị mfe ịsacha ma dozigharị, na-eme ya karama-aga zuru oke na ọrụ, egwuregwu na njem.
Igwe mmiri Charmlite dị mfe iburu ma dị mma maka njem azụmahịa. Mgbe ị na-anọdụ n’elu ụgbọ oloko ahụ, tinye karama ahụ n’elu tebụl, lelee ebe mara mma na mpụga windo ka ị na-a beụ ihe ọ favoriteụ favoriteụ kachasị amasị gị ma na-enwe ọ enjoyingụ n’oge a.
Site na Charmlite karama, nhọrọ ikuku gị nwere ike enweghị oke, yabụ gaa n'ihu ma mee ọtụtụ ihe na ha. Bie ma drinkụọ ya.
350ml, 500ml, karama mmiri 800ml
bullet udi mmiri mmiri
Mpempe mmiri mmiri 350ml mini karama mmiri
Nke gara aga: Charmlite na-adịgide adịgide na-eji 100% Tritan Stemless Wine Glass Barware Glass - 16 oz
Osote: Charmlite Factory Direct ahaziri Logo 650ml kalama Mmiri na Lanyard maka nkwalite
Kalama Crystal Mmiri
Kalama Mason Jar
Karama Mmiri Igwe
Charmlite Kachasị Agbara Reusable Steagless Fulawa ...
Ngosiputa Ntinye ego Dijitalụ Charmlite LCD
Charmlite BPA free ire ere OEM Ọrụ Clear B ...
Ọhụrụ mara mma Yard Slush iko na ahịhịa na ịgba ọtọ ...
Ikike Ighalo Na-acha Ejigharị Ibe Eke na-atọ ụtọ ...